Zuru ezu Ozi banyere CHECKDB Error "Isiokwu njehie: Ihe ID ##, index ID ## ga-wughachi."
Home ngwaahịa DataNumen SQL Recovery CHECKDB Error: Error table: Object ID ##, index ID ## will be rebuilt.
Zuru ezu Ozi banyere CheckDB Error "Njehie njehie: Njirimara ID ##, index ID ## ga-wughachi."
Mgbe ị na-eji DBCC Nyochaa na REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS oke iji rụkwaa nchekwa data .MDF rụrụ arụ, dị ka nke a:
ị na-ahụ ndị na-esonụ njehie ozi:
Mmezi: The Clustered index ọma wughachi maka ihe “sysobjvalues” na nchekwa data “Error1”.
Mmezi: Ndekọ ahaghị aha nke ọma rụzigharịrị maka ihe “syscolpars” na nchekwa data “Error1”.
Nsonaazụ DBCC maka 'Error1'.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysrscols'.
Enwere ahịrị 1092 na ibe 14 maka ihe “sys.sysrscols”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysrowsets'.
Enwere ahịrị 148 na peeji 3 maka ihe "sys.sysrowsets".
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysclones'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysclones”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysallocunits'.
Enwere ahịrị 172 na ibe 2 maka ihe “sys.sysallocunits”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysfiles1'.
Enwere ahịrị 2 na ibe 1 maka ihe “sys.sysfiles1”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysseobjvalues'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysseobjvalues”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syspriorities'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syspriorities”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysdbfnkpuru '.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysdbfnkikara akwa ”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysfgfrag'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysfgfrag”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysdbfiles '.
Enwere ahịrị 2 na ibe 1 maka ihe “sys.sysdbfiles ”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syspru'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syspru”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysbrickfiles'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysbrickfiles”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysphfg'.
Enwere ahịrị 1 na ibe 1 maka ihe “sys.sysphfg”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysprufiles'.
Enwere ahịrị 2 na ibe 1 maka ihe “sys.sysprufiles”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysftinds'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysftinds”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysowners'.
Enwere ahịrị 14 na ibe 1 maka ihe “sys.sysowners”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysdbreg'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysdbreg”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysprivs'.
Enwere ahịrị 140 na ibe 1 maka ihe “sys.sysprivs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syscolpars'.
Mmezi: Peeji (1:63) ka etinyere site na ihe ID 41, ihe ntinye aka ID 1, NJ ID 281474979397632, weputara ID ID 281474979397632 (pinye ihe na ntinye)
Mmezi: The Nonclustered index ọma wughachi maka ihe “sys.syscolpars, nc” na nchekwa data “Error1”.
Msg 8945, Ọkwa 16, State 1, Line 8
Njehie okpokoro: A ga-ewughachi NJ ID 41, ihe ntinye 1.
Enweghi ike ịrụzi njehie a.
Msg 8978, Ọkwa 16, State 1, Line 8
Njehie tebụl: Ihe NJ 41, Ndenye ID 1, NJ ID 281474979397632, wepụta ID ID 281474979397632 (pịnye data ntinye). Peeji (1:61) na-efunahụ ntụaka maka ihu akwụkwọ gara aga (1:63) Enwere ike inwe nsogbu njikọta.
E meziela mperi ahụ.
Msg 8928, Ọkwa 16, State 1, Line 8
Ihe ID 41, Ndenye ID 1, nkebi ID 281474979397632, nyefee ID ID 281474979397632 (pịnye data ntinye): Page (1:63) enweghị ike ịhazi ya. Hụ njehie ndị ọzọ maka nkọwa.
Msg 8939, Ọkwa 16, State 98, Line 8
Njehie tebụl: Ihe NJ 41, Ndenye ID 1, NJ ID 281474979397632, wepụta ID ID 281474979397632 (pịnye data ntinye), ibe (1:63). Nwale (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dara. Ueskpụrụ bụ 2057 na -4.
Msg 8976, Ọkwa 16, State 1, Line 8
Njehie tebụl: Ihe ID 41, NJ ID 1, NJ ID 281474979397632, wepụta ID ID 281474979397632 (pịnye data ntinye). Ahụghị Page (1:63) na nyocha ahụ n'agbanyeghị na ndị mụrụ ya (1: 111) na ndị gara aga (1: 168) na-ezo aka na ya. Lelee njehie ọ bụla gara aga.
Njehie okpokoro: A ga-ewughachi NJ ID 41, ihe ntinye 2.
Enwere ahịrị 881 na ibe 15 maka ihe “sys.syscolpars”.
CHECKDB hụrụ njehie oke 0 na njehie anọghị anọ na okpokoro 'sys.syscolpars' (ihe ID 4).
CHECKDB edozi 0 njehie oke na njehie anọ anọ na tebụl 'sys.syscolpars' (ihe ID 4).
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysxlgns'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysxlgns”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysxsrvs'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysxsrvs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysnsobjs'.
Enwere ahịrị 1 na ibe 1 maka ihe “sys.sysnsobjs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysusermsgs'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysusermsgs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syscerts'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syscerts”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysrmtlgns'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysrmtlgns”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syslnklgns'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syslnklgns”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysxprops'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysxprops”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysscalartypes'.
Enwere ahịrị 34 na ibe 1 maka ihe "sys.sysscalartypes".
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.systypedsubobjs'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.systypedsubobjs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysidxstats'.
Enwere ahịrị 207 na ibe 5 maka ihe “sys.sysidxstats”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysiscols'.
Enwere ahịrị 399 na ibe 2 maka ihe "sys.sysiscols".
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysendpts'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysendpts”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syswebmethods'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syswebmethods”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysbinobjs'.
Enwere ahịrị 23 na ibe 1 maka ihe “sys.sysbinobjs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysaudacts'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysaudacts”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysobjvalues'.
Mmezi: The Clustered index ọma wughachi maka ihe “sys.sysobjvalues” na nchekwa data “Error1”.
Mmezi: Peeji (1:24) ka etinyere site na ihe ID 60, ihe ntinye aka ID 1, NJ ID 281474980642816, weputara ID ID 281474980642816 (pinye ihe na ntinye)
Mmezi: Kọlụm data ehichapụrụ na ID 742981632, maka ihe ID 60, ID ID 1, ID nkewa 281474980642816, wepụta ID ID 71776119065149440 (pịnye data LOB) na ibe (1: 369), oghere 0.
Mmezi: Kọlụm data ehichapụrụ na ID 742981632, maka ihe ID 60, ID ID 1, ID nkewa 281474980642816, wepụta ID ID 71776119065149440 (pịnye data LOB) na ibe (1: 370), oghere 0.
Mmezi: Kọlụm data ehichapụrụ na ID 742981632, maka ihe ID 60, ID ID 1, ID nkewa 281474980642816, wepụta ID ID 71776119065149440 (pịnye data LOB) na ibe (1: 371), oghere 0.
Njehie okpokoro: A ga-ewughachi NJ ID 60, ihe ntinye 1.
Ihe ID 60, Ndenye ID 1, nkebi ID 281474980642816, nyefee ID ID 281474980642816 (pịnye data ntinye): Page (1:24) enweghị ike ịhazi ya. Hụ njehie ndị ọzọ maka nkọwa.
Njehie tebụl: Ihe NJ 60, Ndenye ID 1, NJ ID 281474980642816, wepụta ID ID 281474980642816 (pịnye data ntinye), ibe (1:24). Nwale (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) dara. Ueskpụrụ bụ 2057 na -4.
Njehie tebụl: Ihe ID 60, NJ ID 1, NJ ID 281474980642816, wepụta ID ID 281474980642816 (pịnye data ntinye). Ahụghị Page (1:24) na nyocha ahụ n'agbanyeghị na ndị mụrụ ya (1: 43) na ndị gara aga (1: 213) na-ezo aka na ya. Lelee njehie ọ bụla gara aga.
Njehie tebụl: Ihe NJ 60, Ndenye ID 1, NJ ID 281474980642816, wepụta ID ID 281474980642816 (pịnye data ntinye). Peeji (1:210) na-efunahụ ntụaka maka ihu akwụkwọ gara aga (1:24) Enwere ike inwe nsogbu njikọta.
Msg 8964, Ọkwa 16, State 1, Line 8
Njehie tebụl: Ihe ID 60, ID ID 1, nkebi ID 281474980642816, ekenye ID ID 71776119065149440 (pịnye data LOB). Node data nkwụsị na peeji nke (1: 369), oghere 0, ederede ID 742981632 anaghị arụtụ aka.
Njehie tebụl: Ihe ID 60, ID ID 1, nkebi ID 281474980642816, ekenye ID ID 71776119065149440 (pịnye data LOB). Node data nkwụsị na peeji nke (1: 370), oghere 0, ederede ID 742981632 anaghị arụtụ aka.
Njehie tebụl: Ihe ID 60, ID ID 1, nkebi ID 281474980642816, ekenye ID ID 71776119065149440 (pịnye data LOB). Node data nkwụsị na peeji nke (1: 371), oghere 0, ederede ID 742981632 anaghị arụtụ aka.
Enwere ahịrị 203 na ibe 20 maka ihe “sys.sysobjvalues”.
CHECKDB hụrụ njehie oke 0 na njehie asatọ kwekọrọ na tebụl 'sys.sysobjvalues' (ihe ID 8).
CHECKDB ofu 0 oke njehie na 8 agbanwe agbanwe njehie na tebụl 'sys.sysobjvalues' (ihe ID 60).
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syscscolsections'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syscscolsections”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syscsdictionaries'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syscsdictionaries”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysclsobjs'.
Enwere ahịrị 16 na ibe 1 maka ihe “sys.sysclsobjs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysrowsetrefs'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysrowsetrefs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysremsvcbinds'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysremsvcbinds”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysxmitqueue'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysxmitqueue”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysrts'.
Enwere ahịrị 1 na ibe 1 maka ihe “sys.sysrts”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysconvgroup'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysconvgroup”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysdesend'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysdesend”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysdercv'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysdercv”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syssingleobjrefs'.
Enwere ahịrị 171 na ibe 1 maka ihe “sys.syssingleobjrefs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysmultiobjrefs'.
Enwere ahịrị 107 na ibe 1 maka ihe “sys.sysmultiobjrefs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysguidrefs'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysguidrefs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysfoqueues'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysfoqueues”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syschildinsts'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syschildinsts”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syscompfragments'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.syscompfractions”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysftsemanticsdb'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysftsemanticsdb”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysftstops'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysftstops”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysftproperties'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysftproperties”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysxmitbody'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.sysxmitbody”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysfos'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysfos”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysqnames'.
Enwere ahịrị 98 na ibe 1 maka ihe “sys.sysqnames”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysxmlcomponent'.
Enwere ahịrị 100 na ibe 1 maka ihe “sys.sysxmlcomponent”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysxmlfacet'.
Enwere ahịrị 112 na ibe 1 maka ihe “sys.sysxmlfacet”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysxmlplacement'.
Enwere ahịrị iri na itoolu na ibe 19 maka ihe “sys.sysxmlplacement”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysobjkeycrypts'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysobjkeycrypts”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysasymkeys'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sysasymkeys”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syssqlguides'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syssqlguides”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sysbinsubobjs'.
Enwere ahịrị 3 na ibe 1 maka ihe “sys.sysbinsubobjs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syssoftobjrefs'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syssoftobjrefs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.plan_persist_plan'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.plan_persist_plan”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.plan_persist_context_settings'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.plan_persist_context_settings”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sqlagent_jobs'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sqlagent_jobs”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.sqlagent_jobsteps”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.sqlagent_job_history'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.sqlagent_job_history”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.queue_messages_2009058193'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.queue_messages_2009058193”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.queue_messages_2041058307'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.queue_messages_2041058307”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.syscommittab'.
Enwere ahịrị 0 na ibe 0 maka ihe “sys.syscommittab”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.filetable_updates_2105058535”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.plan_persist_query_text'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.plan_persist_query_text”.
Nsonaazụ DBCC maka 'sys.plan_persist_query'.
Enwere ahịrị 0 n'ime ibe 0 maka ihe “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB hụrụ njehie oke 0 na njehie asatọ na nchekwa data 'Error12'.
CHECKDB ofu 0 oke njehie na 12 anọgidesi njehie na nchekwa data 'Error1'.
Msg 824, Ọkwa 24, State 2, Line 8
SQL Server achoputara njehie I / O dabere na ngosiputa adighi nma: checksum adabaghị (echere: 0xb7bd14b3; real: 0xb7df14b2) O mere n'oge a na-agụ peeji (1:24) na nchekwa data ID 39 na dechapụ 0x00000000030000 na faịlụ 'C: Mmemme faịlụMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ozi ndị ọzọ na SQL Server njehie log ma ọ bụ usoro ihe omume log nwere ike inye nkọwa ndị ọzọ. Nke a bụ ọnọdụ ajọ njọ nke na - eyi egwu iguzosi ike n’ezi ihe nchekwa data ma mezie ya ozugbo. Mezue nchịkọta nchekwa data zuru ezu (DBCC CHECKDB). Enwere ike imehie nje a site n'ọtụtụ ihe; maka ozi ndị ọzọ, lee SQL Server Akwụkwọ na ntanetị.
SQL Server achoputara njehie I / O dabere na nkwekorita dabara adaba: checksum na-ezighi ezi (echere: 0xc8e2ed96; real: 0xb8a2f3df). O mere n'oge a na-agụ peeji (1:63) na nchekwa data ID 39 na dechapụ 0x0000000007e000 na faịlụ 'C: Mmemme MmemmeMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ozi ndị ọzọ na SQL Server njehie log ma ọ bụ usoro ihe omume log nwere ike inye nkọwa ndị ọzọ. Nke a bụ ọnọdụ ajọ njọ nke na - eyi egwu iguzosi ike n’ezi ihe nchekwa data ma mezie ya ozugbo. Mezue nchịkọta nchekwa data zuru ezu (DBCC CHECKDB). Enwere ike imehie nje a site n'ọtụtụ ihe; maka ozi ndị ọzọ, lee SQL Server Akwụkwọ na ntanetị.
ebe 'Error1' bu aha ihe ojoo MDF mebiri emebi.
Nwada 8945 na-egosi njehie table nke bụ njehie agbanwe agbanwe.
Nseta ihuenyo nke njehie ozi:
na a SQL Server MDF nchekwa data, enwere ọtụtụ tebụl usoro ejiri chekwaa ihe owuwu na meta data nke nchekwa data.
Mgbe CHECKDB chọtara na enweghị nkwekọrịta na otu n'ime tebụl usoro, ọ ga-akọ akụkọ njehie Msg 8945, 8978, 8928, 8939, wdg. ma gbalịa idozi njehie ndị ahụ. Ọ bụrụ na ọ nweghị ike idozi njehie ahụ, mgbe ahụ mgbake na-ada ma na-eduga na njehie ndị ọzọ, dị ka Nwada 824.
You nwere ike iji ngwaahịa anyị DataNumen SQL Recovery iji weghachite data site na faịlụ MDF rụrụ arụ wee dozie njehie a.
Ihe nlere mebiri MDF faịlụ nke ga - eme ka Nwada 8945 njehie:
SQL Server version Njehie MDF faịlụ MDF faịlụ kwadoro site DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Njehie5.mdf Njehie5_fixed.mdf